မိန်းမ သားမို့ပါ – Hlataw.com
ခင်သိန်းဆိုတာ အသက်က (၂၅)သာ ရှိသေးသည့် လုံးကြီးပေါက်လှလေးဖြစ်ပြီး ချောသည် လှသည်ဟူသော စာရင်းဝင်သူတယောက်ပင်ဖြစ်ပါသည်။ ဒါပေမဲ့လည်း ယူထားသော ယောက်ျားက ကုန်သည်.. တလလောက်မှ တခေါက်လောက်သာ အိမ်သို့ပြန်လာသည်။ တခါလာလျှင်တော့ တပတ်လောက်နေပြီး ပြန်သွားတတ်သည်။ ပြန်လာလျှင်လည်း ငွေကြေးတွေက အလုံအလောက်ပင် ပါလာတတ်သည်။သို့ပေမဲ့လည်း ခင်သိန်းသည် နဂိုထဲကမှ အသုံးအစွဲကြီးသူဖြစ်၍ ယောကျာ်းခရီးထွက်သွားပြီး မကြာခင်ရက်အတွင်းမှာပင် ငွေက ပြတ်သွားလေ့ရှိပါသည်။ အဲဒီအခါတွင်တော့ ခင်သိန်းသည် အကိုကြီးတယောက်လိုနေသော ဦးမောင်မောင်ထံမှ ငွေချေးရသည်။ အတိုးက နှစ်ဆယ်တိုးဖြစ်သည်။ ကြာလာတော့ အတိုးတွေက နစ်လာသည်။ ငွေချေးထားကြောင်းကိုလဲ ယောကျာ်းကို မပြောရဲ။ ဦးမောင်မောင်၏ ကြွေးတွေက လည်ပင်းခိုက်၍လာရသည်။ သည်ကြားထဲတွင် ယောကျာ်းဖြစ်သူက သူမနှင့် ကင်းကွာပြီး ခရီးထွက်နေရသည်။သွေးသားဆူဖြိုးတုံးအရွယ် ခင်သိန်းတယောက် ဆန္ဒမပြည့်ဝသော ဝေဒနာကို ခံစားလာရသည်။ သည်တော့လဲ တချက်ခုတ် နှစ်ချက်ပြတ်ဆိုတာမျိုးလို သူမကို မကြာခဏ ရိသဲ့သဲ့လုပ်နေသော ဦးမောင်မောင်၏ ကွန်ယက်အတွင်းသို့ အသာလေး ခေါင်းရှိုကာ ဝင်ခဲ့သည်။ ဦးမောင်မောင်က သူချေးထားသော ငွေတွေကို လျှော်ပစ်ရုံမကသေးဘဲ နောက်ပိုင်းတွင် ပုံမှန်ဆိုသလိုပင် သူမကို ထောက်ပံ့ ပေးခဲ့ပါသေးသည်။ ခင်သိန်း၏ ဆာလောင်မွတ်သိပ်နေသော ကာမဆန္ဒများလည်း ပြည့်ဝခဲ့ရသည်။ တချက်ခုတ် နှစ်ချက်ပြတ်ပင် ဖြစ်သည်။
ဒီနေ့ညနေလည်း ခင်သိန်းသည် ညီမဖြစ်သူ ချိုချိုကို ဦးမောင်မောင်၏ အိမ်သို့ စက်ဘီးဖြင့်လိုက်ပို့ခိုင်းပြီး ချိုချိုကို ပြန်လွှတ်လိုက်လေသည်။ အခုပင်လျှင် ဦးမောင်မောင်နှင့် ခင်သိန်းတို့နှစ်ယောက်လုံး အဝတ်အစားများမရှိကြတော့ပဲ ဝတ်လစ်စလစ်ဖြစ်နေကြပြီး ဦးမောင်မောင်က ပက်လက်လှန်၍နေကာ ခင်သိန်းက သူ၏ဘေးတွင် ကပ်ရက်ထိုင်နေ၏။ ဦးမောင်မောင်၏ ထောင်မတ်နေသော လီးကြီးကို လက်ကလေးဖြင့် ကိုင်၍ ကစားနေ၏။ လီးကြီးကလည်း အကြောတွေ ပြိုင်းပြိုင်းထပြီး တဆတ်ဆတ်ဖြစ်နေလေသည်။ ခင်သိန်းက ဦးမောင်မောင်၏လီးကြီးကို သူမ လက်တဖက်ဖြင့် ပွတ်သပ်ပေးနေရင်းက ခေါင်းကိုငုံ့ကာ အရင်းက ဥကို လျှာလေးနဲ့ တယုတယ လျက်ပေးသည်။ လီးတန်ကြီးတလျှောက် လျှာလေးနှင့်တက်လာရင်း ဆီးပေါက်ဝထိပ်အကွဲလေးကို လျှာဖျားလေးနဲ့ ထိုးသည်။ ပြီးတော့ လီးချောင်းကြီးတချောင်းလုံးကို သူမအာခံတွင်းထဲ စုပ်မျိုလိုက်ရော။” အ.. အင်း.. မြင့်.. အင့်.. ဟင်း ” ဦးမောင်မောင်၏ ကိုယ်လုံးကြီးမှာ တွန့်ကနဲ တချက်ဖြစ်သွားရပြီး သူ၏ခါးကြီးမှာ ကော့၍ တက်လာ၏။ ပြီးတော့ ဦးမောင်မောင်၏ လက်နှစ်ဖက်က ခင်သိန်း၏ ဆံပင်တွေကြားထဲ ထိုးသွင်းကာ အားမလိုအားမရဖြင့် ပွတ်သပ်နေ၏။ နောက်တော့ ဦးမောင်မောင်၏ လက်တဖက်က ခင်သိန်း၏ နို့အုံကြီးတွေဆီကို ရောက်သွားပြီး ဆုတ်နယ်နေကာ နောက်တဖက်ကတော့ စူစူမို့မို့လေးရှိနေတဲ့ စောက်ဖုတ်လေးကို လက်ညိုးလက်မနဲ့ ဖြဲပြီး လက်ခလယ်နဲ့ စောက်စိလေးကို ကလိပေးနေ၏။ ခင်သိန်းကလည်း ခါးလေးတွန့်ပြီး တင်ပါးကြီးကို ရမ်းကာ ခံစားချက်တွေ အရမ်းပြင်းထန်လို့နေ၏။ ခင်သိန်းသည် ဦးမောင်မောင်၏ လီးကြီးကို လက်နှစ်ဖက်နဲ့စုံကိုင်ပြီး သူမ၏ ပါးစပ်ထဲသို့ သွင်းလိုက် ပြန်ထုတ်လိုက် သူမရဲ့လျှာလေးနဲ့ ဒစ်ကြီးပတ်ပတ်လည်ကို ယက်ပေးနေတော့၏။ ခဏအကြာမှာတော့ ခင်သိန်းသည် ပက်လက်လှန်နေသော ဦးမောင်မောင်၏ ကိုယ်လုံးကြီးပေါ်သို့ တက်ခွကာ လီးကြီးကို လက်နှင့်ကိုင်လျှက် သူမ၏စောက်ဖုတ်လေးထဲသို့ ထိုးသွင်းကာ မှောက်ချလိုက်၏။ စူစူမို့မို့လေးဖြစ်နေသော ခင်သိန်း၏စောက်ဖုတ်လေးသည် လီးကြီး၏ဒဏ်ကြောင့် အတွင်းသို့ခွက်ဝင်သွားရတော့သည်။
ခင်သိန်း၏ဖင်ကြီးများ ပြန်ပြီးမြှောက်လိုက်တော့ သူမစောက်ဖုတ်နှုတ်ခမ်းသားတွေက လီးကြီးရဲ့ အကြောကြီးတွေနဲ့ ညိပြီး ပြန်ကြွလို့ ဖောင်းကားလာပြန်၏။ နှုတ်ခမ်းခြင်းစုပ်ပြီး ပူးနေပေမဲ့ ခါးအောက်ပိုင်းကတော့ ပူးလိုက် ကွာလိုက်နဲ့ ဖွတ်ဖွတ် ပြွတ်ပြွတ်အသံတွေက အခန်းထဲတွင် ညံနေသည်။ ခင်သိန်းသည်မျက်စိစုံမှိတ်ကာ အဆက်မပြတ်ဖင်ပြောင်ကြီးကို စကောဝိုင်း ဝိုင်းပေးရင်း ပါးစပ်ကလည်း တဟင့်ဟင့်နှင့် အဆက်မပြတ်မြည်တမ်းနေတော့သည်။ ဦးမောင်မောင်က နို့သီးခေါင်းလေးတွေကို ကိုင်၍ဆွပေးသောအခါ ခင်သိန်းက ဘယ်ညာယိမ်းထိုးလျက် သူ့စိတ်ကြိုက်အားကုန်ဆောင့်လေတော့သည်။ အင့်.. အင့်.. အား.. အား.. အသံတွေသည် ခင်သိန်းတို့၏ လိုးချက်အတိုင်း စည်းဝါးလိုက်နေသလို ကာမအထွတ်အထိပ်သို့ ရောက်ခါနီးပြီလားမသိ။ ခင်သိန်းသည် တဖောင်းဖောင်းဖြင့် ဖိချနေသလို ဦးမောင်မောင်၏လီးကြီးကလည်း ခင်သိန်းစောက်ခေါင်းလေးထဲကို ဗြစ်ကနဲ ဗြစ်ကနဲ ဝင်လိုက် ထွက်လိုက်ဖြစ်နေသည်။ ဦးမောင်မောင်က ခင်သိန်း၏ ကော့နေသော နို့အုံကြီးကို တပြွတ်ပြွတ်စို့ပေးနေရင်းက သူ၏လက်နှစ်ဖက်ကလဲ ခင်သိန်း၏ ဖင်သားကြီးများကို ဆုတ်နယ်ချေမွပေးနေ၏။ နှစ်ဦးသား အရှိန်ပြင်းစွာ လိုးနေကြရင်းက ခင်သိန်း၏ ဖင်ကြီးသည် ဆောင့်နေရာမှ တဖြေးဖြေးအရှိန်လျော့ကျသွားလေတော့သည်။ မျက်လေးများ မှေးစင်းရင်း စောက်ရည်များက ဦးမောင်မောင်၏ဂွေးအုကြီးများပေါ်မှတဆင့် အိပ်ယာခင်းပေါ်သို့ စီးကျသွားကြတော့သည်။
အားပါးတရလိုးကြပြီးနောက် အကိုကြီးဦးမောင်မောင်က အိပ်ယာပေါ်တွင် အရက်သောက်ရင်း အမောဖြေနေလေသည်။ ခင်သိန်းလည်း ရေချိုးခန်းဖက်ထွက်ခဲ့ရင်း ရေကို တဝကြီးချိုးလိုက်သည်။ သူမတကိုယ်လုံး လန်းဆန်းသွားပြီး စောက်ဖုတ်လေးရော နို့ကြီးတွေကိုပါ ဆပ်ပြာတိုက်နေသည်။ ” ခင်ရေ အကိုကြီး ရေချိုးမယ်ကွာ ” ရေချိုးခန်းထဲ ရောက်ရောက်ချင်း ဦးမောင်မောင်သည် ခင်သိန်းကို ဖက်၍ နှုတ်ခမ်းချင်း စုပ်ပစ်လိုက်၏။ လက်တဖက်ကလည်း ခင်သိန်း၏ စောက်ဖုတ်ကို မထိတထိဆွပေးနေပြန်သည်။ ခုလေးတင် လိုးခဲ့ပြီးတဲ့လီးကြီးကလည်း ထောင်မတ်မာကျောလို့နေသည်။ ခင်သိန်းလည်း ပုထုဇဉ်မို့ ဘာခံနိုင်မှာလဲ။ အကိုကြီးဦးမောင်မောင်ရဲ့ ကိုယ်လုံးကြီးကို ပြန်ဖက်ပြီး နမ်းရင်း သူ့လီးကြီးကို ဆုတ်ကာ ဆုတ်ကာနဲ့ ပွတ်ပေးနေမိတော့၏။ တင်းအိနေတဲ့ ခင်သိန်းရဲ့နို့အုံထွားထွားကြီးကို စို့ရင်း လက်ခလယ်နဲ့ သူမစောက်ခေါင်းလေးထဲ ထိုးထိုးပြီး ကလိပေးနေပြန်သေးသည်။ ခင်သိန်းသည် သည်အတိုင်း မနေနိုင်ဖြစ်လာတော့သည်။ ဦးမောင်မောင်၏ ကိုယ်လုံးကြီးကို တင်းကြပ်စွာဖက်ရင်း ရင်ဘတ်ရော လည်ပင်းကိုပါ ခပ်ဖွဖွလေး ကိုက်ပစ်လိုက်သည်။ခင်သိန်းရဲ့နို့အုံတွေကို အကိုကြီးလက်က ချေမွနေလိုက်တာ ကြေမွပြီး နို့တွေတွဲကျသွားမှာပင် စိုးမိသည်။ ” ချစ်တယ် ခင်လေးရယ် အကိုကြီး သိပ်ချစ်တယ် ” ” ခင်လေးလဲ အတူတူပါပဲ အကိုကြီးရယ်.. ” ” လေးဘက်ထောက်ပေးပါလား.. ခင်လေးရယ် ” နှစ်ခေါက်ပင် မပြောရပါ။ မွှန်ထူနေတဲ့ ခင်သိန်းတယောက် ခပ်ကျဉ်းကျဉ်းရေချိုးခန်းထဲက ကြမ်းပြင်လေးမှာပင် လေးဘက်ထောက်ပေးလိုက်တယ်။ လေးဘက်ထောက်ကာ ကုန်းထားသည့်အတွက် ပြူထွက်နေသော ခင်သိန်း၏ စောက်ဖုတ်နီတာရဲလေးကို အကိုကြီးဦးမောင်မောင်က သူ့လီးကြီးနဲ့တေ့ကာ ဖိသွင်းလိုက်တော့သည်။ ” ဗြစ်.. ဗြစ်.. ဖွတ်.. ပြွတ်.. အား.. အင်း.. ဟင်း.. ကျွတ်.. ကျွတ်.. အား.. ” အသံတွေက ရေချိုးခန်းထဲတွင် ဆူညံနေတော့သည်။ ဦးမောင်မောင် လိုးလိုက်တာ တအားပင်ဖြစ်သည်။ ခင်သိန်း၏နို့ကြီးနှစ်လုံးက စုံကိုင်ဆွဲကာ အငမ်းမရဆောင့်နေသည်။ ရေတွေစိုနေသဖြင့်လည်း အသံများမှာ ဆူညံနေသည်။ အိမ်ထဲတွင် လူမရှိ၍ တော်သေးသည်။
” အား.. အား.. ကျွတ်.. ကျွတ်.. ” ခင်သိန်းကလည်း အကိုကြီး ဆောင့်အားကောင်းစေရန် သူမ၏ ဖင်ကြီးကို နောက်သို့ပစ်ပစ်ပေးနေမိသည်။ ခင်သိန်းတယောက်အလိုးခံခဲ့ဘူးသမျှ လီးတွေထဲမှာတော့ အကိုကြီး၏ လီးက အရှည်ဆုံးမို့ထင်၏။ သူမ၏ သားအိမ်ကိုပင် လာ၍ လာ၍ ထောက်နေသည်။ ” အင့်.. အင့်.. နာနာဆောင့် အကိုကြီး..ခင်လေးကို မညှာနဲ့.. ဖွတ်.. ဖွတ်.. ပြွတ်.. ပြွတ်.. ” ခင်သိန်းထန်နေမှန်းသိ၍ ဦးမောင်မောင်တယောက် မျက်နှာနီမြန်းကာ နားထင်ကြောများထောင်လာသည် အထိ အစွမ်းကုန် ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်း ဆောင့်၍ ဆောင့်၍ လိုးပေးနေသည်။ အသံတွေမြည်ပြီး လိုးအားကလဲ ပိုကြမ်းလာသည်။ ” ကောင်းလိုက်တာ.. အကိုကြီးရယ်.. ” မကြာခင်မှာပင် အဝင်အထွက်မှန်နေသော လီးကြီးသည် ပိုမာကျောလာပြီး စောက်ပတ်ထဲ အဆုံးထိဝင်ရန် အားနဲ့ဆောင့်ဆောင့်ထိုးလိုက်တိုင်း ရှေ့သို့စိုက်ကျသွားပေမဲ့ ခင်သိန်းက ကျေနပ်နေ၏။ အချက်ပေါင်း မရေမတွက်နိုင်လောက်အောင် လိုးပြီးနောက် အကိုကြီးတယောက် ငေါက်ကနဲ ဆတ်ကနဲဖြစ်ကာ ပူနွေးချွဲပြစ်သော လရည်တို့ကို ခင်သိန်း၏စောက်ခေါင်းအတွင်းသို့ ပန်းထဲ့လိုက်တော့သည်။ခင်သိန်းမှာလဲ သူမ၏ဖင်ကြီးကို ရှုံ့ရင်း သက်ပြင်းချလိုက်တော့ သူမ၏စောက်ရည်လေးများသည်လည်း ရွှဲကနဲထွက်ကုန်တော့၏။ ခင်သိန်းသည် ကျောလေးကော့ပြီး အကိုကြီးဦးမောင်မောင်ရင်ခွင်ထဲမှီလိုက်ရင်ဘဲ သူမ၏နို့ကြီးများကို စုံချေခြင်း ခံလိုက်ရပြန်သည်။ အတော်လေးကြာတော့မှ ခင်သိန်းက သူ့ရင်ခွင်ထဲက ထွက်ပြီး ရေချိုးပြစ်လိုက်သည်။ အကိုကြီးဦးမောင်မောင်၏ ကြောက်စရာကောင်းလှသော လီးကြီးကတော့ မာပြီးတောင်နေဆဲပင်ဖြစ်တော့သည်။ ချိုချိုတယောက် သူမ၏အစ်မ ခင်သိန်းကို ဦးမောင်မောင်အိမ်ရှေ့မှာ ချပေးခဲ့ပြီး ရုပ်ရှင်ရုံရှေ့ကို ရောက်လာတော့ အောင်မင်းက အဆင်သင့်စောင့်နေ၏။ ဒီလိုနှင့် ချိုချိုသည် အောင်မင်းနှင့်အတူ ရုပ်ရှင်ရုံထဲဝင်ခဲ့တော့သည်။
ရုပ်ရှင်ပြလို့အတော်ကြာတာတောင် အောင်မင်းက ချိုချိုဖက်ကို ကပ်မလာဘူး။ ခါတိုင်းဆို ရုပ်ရှင်ရုံထဲ ရောက်ပြီး မီးမှိတ်တာနဲ့ အတင်းပဲဖက်ပြီး အငမ်းမရနမ်းနေကျကိုး။ အခုတော့ အောင်မင်းက တမျိုးဖြစ်နေ၏။ ဘယ်ရမလဲ ချိုချိုက အောင်မင်း၏မျက်လုံးတွေရှေ့ကို သူမ၏လက်ဝါးဖြင့် ကာလိုက်၏။ ” ဘာဖြစ်နေတာလဲ ကိုအောင်.. ” ဒီတော့မှ ဘသားချောက နတ်သံမနှောဘဲ ပြောတော့၏။ သူဟာ အချစ်ကံဆိုးသူရယ်ပါတဲ့၊ သူ့ကို ကောင်မလေးတယောက်က မချစ်ဘဲနဲ့ ချစ်ဟန်ဆောင်နေတာပါတဲ့၊ ချိုချိုကို စောင်းပြောတာပေါ့၊ သမီးရည်းစားဖြစ်လာတာ တနှစ်ကျော်ကြာခဲ့ပြီး တခါမှ လွတ်လွတ်လပ်လပ်မတွေ့ရဘူး၊ ဒီနေ့တော့ နှစ်ယောက်ထဲတွေ့ချင်တယ်၊ တကယ်မချစ်ဘူးဆိုလဲ ရပါတယ်ဟု ဆိုလာ၏။ ဒီလိုပြောလာတော့လဲ သနားစရာပင်ဖြစ်၏။သူ့ပခုးပေါ် ချိုချိုရဲ့ခေါင်းလေးတင်ပြီး သူ့နားရွက်လေးကို ချိုချိုက နမ်းလိုက်၏။ ဒီတော့ ဖိုမဓါတ်တို့တွေ့ကာ ချက်ချင်းမီးတောက်ခဲ့ရ၏။ ခေါင်းလေးတွေပူးပြီး နှုတ်ခမ်းချင်းစုပ်နမ်းကြတော့၏။ အောင်မင်းရဲ့လက်တဖက်ကလည်း ချိုချိုရဲ့စောက်ဖုတ်လေးကို အသာပွတ်ပေးနေပြီး ခဏကြာတော့ ချိုချိုရဲ့လက်လေးကိုဆွဲကာ သူ့လီးကြီးကို ကိုင်ခိုင်းပြန်သည်။ ဘေးကလူများက ရုပ်ရှင်ထဲတွင်သာ အာရုံစိုက်နေသည့်အတွက် တော်သေး၏။ ကဲလွန်းနေသည့် ကိုအောင်၏လီးကြီးက လက်တဖက်နဲ့ဆုပ်ထားတဲ့ကြား မာတောင်ပြီးတဆတ်ဆတ်ဖြစ်နေ၏။ ဒီတခါ နို့လေးတွေကို အနယ်ခံရပြီး နှုတ်ခမ်းချင်းအစုပ်မှာ ချိုချိုတယောက် စစ်ခနဲခံစားလိုက်ရသည်။ သွားပြီ၊ စိတ်တွေကြွလို့ စိမ့်ထွက်လာတဲ့စောက်ရည်တွေကြောင့် ရုပ်ရှင်မပြီးခင် ထပြီး ထမိန်ပြင်ဝတ်ရဦးမည်ဖြစ်သည်။
” ဟယ်..ကိုအောင်အိပ်တဲ့ ထပ်ခိုးလေးက အကျယ်ကြီးနော်.. ကဲ..ဘာပြောမှာလဲ ကိုအောင်.. နှစ်ယောက်ထဲကျ ပြောမယ်ဆို.. ” ” ချစ်တယ် ချိုချိုရယ်.. သိပ်ချစ်တယ်ကွာ ” အသံတုန်တုန်ရင်ရင်နဲ့ပြောရင်း အောင်မင်းက ချိုချို၏နောက်မှ သိုင်း၍ဖက်ကာ လည်တိုင်လေးကို နမ်းတော့၏။ လက်တဖက်ကလည်း နို့အုံလေးတွေကို အုပ်ကိုင်ထားရင်း နောက်လက်တဖက်က စောက်ဖုတ်လေးကို ထမိန်ပေါ်မှ ပွတ်ပေးနေလိုက်တာ ချိုချို၏ရင်ထဲတွင် လှိုက်ဖိုနေရတော့၏။ နောက်တော့ မျက်နှာချင်းဆိုင် လှည့်ကာ နှုတ်ခမ်းချင်းစုပ်ကြပြန်သည်။ ကျောသိုင်းဖက်ရင်းနဲ့ ဇစ်လေးဖြုတ်ပြီး အင်္ကျီကို ချွတ်လိုက်တော့သည်။ ဘရာစီယာလေးအတွင်း မလုံ့တလုံ့ဖြစ်နေရှာတဲ့ နို့နှစ်လုံးကို နမ်းနေသည့် အောင်မင်းမှာ ကလေးတယောက်လိုပင်။ နို့နှစ်လုံးအကြားထဲကို တရှိုက်မတ်မတ်နမ်းရှုံသည်။ နို့အားမထိတထိကိုက်လိုက် လျှာဖြင့်လျှက်လိုက်နှင့် ဆွနေသည်။ ပြီးတော့ ကိုအောင်က ချိုချို၏လက်တဖက်ကို အသာဆွဲပြီး သူ့လီးကြီးပေါ် တင်ပေးလိုက်သည်။အောင်မင်း၏ အကြောပြိုင်းပြိုင်းထလျက် မာတောင့်နေသောလီးကြီးမှာ အတော်ပင်ကြီး၏။ လက်ကလေးနဲ့ အားကုန်ဖျစ်ညစ်တာအောင် လက်ညိုးနဲ့လက်မကောင်းကောင်းမထိချင်။ ” အင်း.. ဟင်း.. ကိုအောင်ရယ်.. ” အသံလေးမှ မဆုံးခင် အောင်မင်းက သူမကို နှုတ်ခမ်းချင်းတေ့ကာ စုပ်ပြန်သေးသည်။ ဖောင်းကြွလာနေတဲ့ ချိုချိုရဲ့စောက်ဖုတ်လေးကို ထမိန်ပေါ်က ခပ်ကြမ်းကြမ်းပွတ်နေပြန်တော့ ချိုချိုတယောက် မရိုးမရွနဲ့ အားမလိုအားမရဖြစ်လာရတော့သည်။ အောင်မင်းက နှုတ်ခမ်းချင်းစုပ်ရင်း ချိုချိုကို အိပ်ယာပေါ်လှဲသိပ်ပေးလိုက်၏။ ချိုချို၏လည်ပင်း လည်တိုင်လေး နို့လေးများကို နမ်းပေးရင်းက တဖြေးဖြေးအောက်ဘက်ကို လျှောပြီး သူမ၏ချက်ကလေးဆီရောက်လာတော့သည်။
ချိုချိုခမျာလည်း အင်း..ဟင်း..ဟင်းဟူသော အသံလေးများ ညီးတွားလျှက် သူမလက်ကလေးများဖြင့် အောင်မင်း၏ခေါင်းက ဆံပင်များကို ထိုးဖွပေးနေမိသည်။ ဒီအချိန်မှာပဲ ချိုချိုရဲ့ကိုယ်လုံးကလေးဟာ လူးလူးလွန့်လွန့်ဖြစ်လာလျက် အောင်မင်းက သူမ၏ထမီလေးကို ဆွဲချွတ်လိုက်ချိန်တွင် ဖင်ကလေးကိုပင် ကြွပေးလိုက်မိတော့သည်။ အောင်မင်းက ချိုချို၏ ဖြူဖြူဖွေးဖွေးပေါင်လုံးကြီးတဖက်ကို နမ်းရှုံရင်း ကျန်လက်တဖက်ကတော့ ဖင်သားကြီးများကို ဆုပ်ချေနေလေသည်။ အဲ့ဒီနောက်တော့ သူမ၏ပေါင်နှစ်လုံးကြားထဲ ခေါင်းဝင်ပြီးဖောင်းမို့နေတဲ့ စောက်ဖုတ်နီတာရဲလေးကို လက်နဲ့အသာဖြဲပြီး စောက်စိချွန်ချွန်လေးကို သူ၏လျှာကြမ်းကြီးဖြင့် ကုန်းရက်လိုက်တော့သည်။” အ.. ကိုအောင်.. အင်း.. ဟင့်.. ကိုအောင်ရယ်.. ဘာတွေလုပ်နေတာလဲကွယ်.. အင်း.. ဟင်း.. ဟင်း.. အား.. အား.. ” ချိုချို၏ခါးလေးမှာ ကော့၍ ကော့၍ တက်လာရင်း သူမ၏အသက်ရှူသံများသည်လည်း ပြင်းလာရလေသည်။ ” အင့်.. ဟင့်.. ချိုချိုမနေနိုင်တော့ဘူးကွယ်.. ” ချိုချိုမှာ ပြောရင်းက အားမလိုအားမရဟန်ဖြင့် အိပ်ယာခင်းကို လက်ဖြင့် ဆုပ်ချေနေတော့သည်။ ချိုချိုတယောက် စစ်ကနဲ ကျင်ကနဲ ခံစားနေရသည်မို့ ညီးတွားနေရခိုက် သူမ၏စောက်ခေါင်းထဲသို့ လျှာကြီးအဆုံးအထိတွင်လာချိန်မှာတော့ ဖင်ကြီးပင် ကြွတက်သွားရတော့သည်။ အောင်မင်းက ချိုချို၏ စောက်မွှေးလေးများကို ဖွဖွလေးဆွဲပြီး စောက်ဖုတ်နှုတ်ခမ်းအတွင်းသားများကို ငုံရင်း စောက်ပတ်အကွဲကြောင်းလေးအတိုင်း အထက်အောက် လျှာဖြင့် ကလိပေးနေပြန်သည်။ အောင်မင်း၏လျှာဒဏ်ကြောင့် ချိုချိုခမျာ ခါးလေးတွန့်ပြီး ကော့၍ ကော့၍တက်လာသည်။
ချိုချို၏စောက်ပတ်တခုလုံးလည်း ပူနွေးလာပြီး ရင်ထဲ ဟာ၍ဟာ၍သွားရ၏။ သူမ အသဲထဲပင် ကျင်ပြီး အေးစိမ့်သွားနေရတော့၏။ ချိုချိုသည် တခါမှ အမှုတ်မခံခဲ့ဘူးတော့ စောက်ပတ်ထဲကလား၊ ရင်ထဲကလားပင်မသိ ဟာသွားသလိုလို ဖိုသွားသလိုလိုဖြင့် ဖင်ကြီးများကိုပင် ကော့ ကော့ပေးနေမိသည်။ အရသာရှိလိုက်တာကလဲ မပြောပါနှင့်တော့။ တခါတခါများ အောင်မင်းရဲ့လျှာကြမ်းကြီးက ချိုချိုရဲ့စောက်စိလေးကို ပွတ်တိုက်သွားတဲ့အခါဆိုရင် ချိုချိုတယောက် ဘယ်လိုကြီးခံစားသွားရမှန်း မသိဘူး။ ချိုချိုတယောက် အောင်မင်းရဲ့ခေါင်းကို အတင်းထဖက်ပြီး နှုတ်ခမ်းချင်း စုပ်ပစ်လိုက်တော့သည်။ ဒီအခါမှာတော့ ကိုအောင်က ချိုချိုရဲ့ဖင်သားကြီးကို ဆုပ်နယ်ပေးပြန်ပါသည်။ သူတို့နှစ်ဦးစလုံး ကာမစိတ်တွေ ပြင်းပြင်းထန်ထန် တက်ကြွနေကြပြီဖြစ်သည်။ ခဏနေတဲ့အခါမှာတော့ အောင်မင်းက ချိုချိုကို တစောင်းလှဲအိပ်ခိုင်းပြီး နောက်ကနေ သူမပေါင်တလုံးကို မပြီးဖြဲကာ နီတာရဲနေတဲ့ စောက်ပတ်လေးထဲသို့ သူ၏ လီးကြီးကို အသာတေ့ရင်း ဖြေးဖြေးချင်းသွင်းလိုက်တော့သည်။” အ..အ.. နာတယ်.. ကိုအောင်ရယ်.. အင်း.. ” အောင်မင်း၏လီးကြီးသည် ချိုချို၏စောက်ပတ်လေးထဲ တဝက်မရှိတရှိဝင်နေတဲ့အခိုက်မှာပင် စောက်ခေါင်းတခုလုံး ပြည့်ကျပ်သိပ်နေတော့၏။ အောင်မင်းက သူ၏လီးတန်ကြီးကို အသာရပ်ထားပြီး သူမနို့ကြီးတလုံးကို နယ်ပေးရင်း နောက်နို့သီးခေါင်းလေးတခုကို ရွရွလေးချေပေးနေ၏။ အောင်မင်းက သူမ၏လည်တိုင်လေးနှင့် ဆံစပ်လေးများကို လျှာဖျားလေးဖြင့် ကလိပေးနေသည်။ ချိုချိုကလဲ ဖင်ကြီးများကို နောက်သို့မသိမသာ ကော့ကော့ပေးနေမိသည်။ အလိုက်သိသော လီးကြီးက ဖြေးဖြေးမှန်မှန်ပင် စောက်ပတ်လေးထဲ တိုးဝင်သွားတော့သည်။ ” ဖွတ်.. ပြွတ်.. ဖွတ်.. အား.. အား.. အင်း.. ကျွတ်.. ကျွတ်.. ” ငြီးသံလေးများထွက်လာသလို ချိုချို၏ရင်ထဲမောလာသလို အောင်မင်း၏လီးကြီးကလည်း သူမစောက်ပတ်လေးထဲ ပိုကြီးလာသလို ခံစားလာရသည်။ လီးကြီးက ဆောင့်ချက်မှန်မှန်ဖြင့် ဝင်ထွက်နေသော်လည်း ကာမစိတ်ပြင်းထန်နေသော ချိုချိုကတော့ အားမလိုအားမရဖြစ်ကာ သူမ၏ဖင်ကြီးကို နောက်သို့ ပစ်ပစ်ပေး၏။ အောင်မင်းက ဆောင့်၍အလိုး ချိုချိုက ဖင်ကြီးနောက်သို့ပစ်အပေးမှာ ဆုံသွားလျှင်တော့ လီးကြီးသည် သူမရင်ခေါင်းထဲ ရောက်ရောက်သွားသလားပင် အောက်မေ့ရသည်။
” တခါထဲကို အောင့်အောင့်သွားတာပဲ.. ကိုအောင်ရယ်.. ” တဖွတ်ဖွတ်နဲ့ဆောင့်ချက်တွေက ပြင်းထန်လာသည်။ အောင်မင်းက သူမနို့ကြီးတွေကို အတင်းချေရင်း ဆောင့်ချက်တွေကို အရှိန်မြှင့်လာသည်။ နှစ်ဦးသား ချွေးတွေရွှဲနေပေမဲ့ အသဲထဲအေးနေ၏။ ” ဆက်ဆောင့်ပေးပါ..ကိုအောင်ရယ်.. နာနာလေးဆောင့်ပေးစမ်းပါ..ချို ဘယ်လိုဖြစ်လာမှန်းမသိဘူး.. ” အောင်မင်းက ကြုံး၍ကြုံး၍ ဆက်တိုက်ဆောင့်လိုက်ရာ နှစ်ဦးသား ကာမပန်းတိုင်သို့ ရောက်သွားကြပြီး စောက်ရည်များနှင့် သုက်ရေများ ရွှဲရွှဲစိုကုန်တော့လေသည် ခဏအကြာမှာတော့ အနားယူနေရင်း အောင်မင်းက ချိုချို၏နှုတ်ခမ်းလေးများကို ခပ်မျှင်းမျှင်းလေး စုပ်ပေးနေသည်။ ချိုချိုကလဲ အောင်မင်းတကိုယ်လုံးကိုဖက်ရင်း ပြန်၍နမ်းပေးလိုက်သည်။ ရမ္မက်စိတ်တွေ ငြိမ်းအေးမသွားသေးသော ချိုချိုက အောင်မင်း၏လီးချောင်းကြီးကို လှမ်းကိုင်လိုက်သည်။ လီးတောင်မနေပဲနဲ့တောင် လုံးပတ်ကတုတ်ပြီး နည်းတာကြီးမဟုတ်ဘူး။ ချိုချို အားပါးတရဆုပ်ကိုင်ကာ ဖျစ်ညှစ်ပွတ်သပ်မိတော့ လက်ထဲတွင် တစထက်တစ စံချိန်မှီအောင်ပင် မာတောင်လာခဲ့ရချေပြီ။ ချိုချိုက သူမ၏ပေါင်တန်ကြီးတဖက် အောင်မင်း၏ပေါင်ပေါ်သို့ ခွတင်လိုက်တော့ လီးတန်ကြီးမှာ သူမစောက်ဖုတ်လေးနှင့် မလွတ်မလပ်ဖြစ်ကာ ထိုးထောက်မိလိုက်ပြန်ပါသည်။ အောင်မင်းက ချိုချို၏ နှုတ်ခမ်းလေးများကို ဆွဲစုပ်ရင်းက ပေါင်ကြီးတဖက်ကို သူမ၏ပေါင်နှစ်လုံးကြားထဲ ထိုးသွင်းလိုက်ပြီးနောက် လီးတန်ကြီးကို စောက်ပတ်အဝတွင်တေ့ကာ ထိုးသွင်းလိုက်ပါတော့သည်။ ခါးလေးတွန့်သွားရာမှပင် ချိုချိုသည် စောက်ပတ်ကြီးကို ကော့၍ပေးလိုက်ကာ အောင်မင်းကလဲ သူမ၏ခါးလေးကို ဆွဲ၍ဆွဲ၍ဆောင့်လိုးလေတော့သည်။
” အင့်.. ဟင့်.. ကို..ကိုအောင်ရယ်.. ဟင့်.. ဟင့်.. ” လီးတန်ကြီးဝင်သွားပြီဆိုကတည်းက ချိုချိုတယောက် မျက်လုံးတွေ မှေးစင်းကာ ကျိတ်မနိုင် ခဲမရဖြစ်နေရလေသည်။ အောင်မင်း၏ဆောင့်ချက်တွေကလည်း စီးစီးပိုင်ပိုင်ဖြင့် ပြင်းထန်လှသလို သူမ၏စောက်စိလေးကို ဖိသိပ်သလိုပင်ဖြစ်နေပြန်တော့ အသဲခိုက်အောင် ကောင်းနေရလေသည်။ မကြာလိုက်ပါချေ။ အောင်မင်းကိုဖက်ထားသော သူမလက်နှစ်ဖက်မှာ တိုး၍တင်းကြပ်စွာ ဖက်လိုက်သလို အောင်မင်းလက်တွေလည်း သူမခါးလေးကို အတင်းပင်သိမ်းကြုံးဖက်လိုက်တော့သည်။ လှမေသည် အသက်(၂၆) တခုလပ်တယောက်ဖြစ်ကာ ငွေကြေးလည်းပြည့်စုံသူတဦးဖြစ်သည်။ ယောကျာ်းဆုံးသွားသည်မှာ သုံးနှစ်ခွဲခန့်ကြာခဲ့ပြီဖြစ်ပြီး ကာမအရသာကို ချိုသည်၊ ခါးသည်သိနေရက်နဲ့ သူမ၏မပြည့်ဝသော ဆန္ဒများအတွက် ရတက်မအေးနိုင်အောင်ဖြစ်နေရလေသည်။ ယနေ့ညလဲ ကြွေးတောင်းသွားစရာရှိသဖြင့် အောင်မင်းကို အဖော်ခေါ်ထားသည်။ မိန်းမသားတယောက်ထဲနေသူမို့ ဟိုနားသည်နားသွားစရာရှိလျှင် အောင်မင်းနဲ့သာသွားလေ့ရှိပါသည်။ အောင်မင်းမှာ သူမထက် အသက်အများကြီးငယ်သည်မို့ လူအမြင်လဲတင့်တယ်သည်။ အပြင်သွားမည်ဖြစ်၍ တံခါးအားလုံးပိတ်ကာ အဝင်အထွက်ပေါက်လေးသာ အသာဟထားလိုက်သည်။ အောင်မင်းသည် ဟထားသော တံခါးလေးကို တွန်းဖွင့်ကာ အိမ်ထဲသို့လှမ်းကြည့်၍ ပြုံးပြလိုက်ပြီး ထိုင်ရာမှ အထတွင် မလှမေသည် သူမခေါင်းလေးကို လက်တဖက်မှ ကိုင်ရင်း ကုလားထိုင်ပေါ်သို့ ပြန်ထိုင်ကျသွားသည်။
” အို..မူးလိုက်တာ.. ” အောင်မင်းက ကမန်းကတန်းအနားသို့ရောက်သွားသည်။ ဘာလုပ်ရမှန်းမသိဘဲ မလှမေ၏နားထင်လေးနှစ်ဖက်ကိုသာ နှိပ်ပေးနေ၏။ မွှေးကြိုင်လှသော လှမေ၏ရနံ့များက အောင်မင်း၏ရင်ကို လှုပ်ခါလေပြီ။ ထို့အပြင် အသက်ရှူလိုက်တိုင်း နိမ့်ချီမြင့်ချီဖြစ်နေသော နို့အုံဖောင်းဖောင်းမို့မို့တွေက်လဲ ရမ္မက်စိတ်ကိုနှိုးဆွနေချေသည်။ အောင်မင်းသည် တံထွေးကို မျိုချရင်း ယပ်ခပ်ပေးနေသည်။ သူမကို စိုက်ကြည့်ကာ ယပ်ခတ်ပေးနေသော အောင်မင်းကို မျက်လုံးလေးမှေးကြည့်ရင်းက လှမေ ထဖက်ချင်စိတ်တွေပေါက်နေရသည်။ မိန်းမသားမို့သာ ထိန်းနေရသည်။ အောင်မင်းအဖို့လဲ အခက်တွေ့နေသည်။ ဟိုတနေ့ကမှ ချစ်သူချိုချိုကို ပါကင်ဖွင့်ပြီး အသာချော့လိုးခဲ့သည်။ ချိုချိုကို နှစ်ချီနှစ်မောင်းလိုးပြီး သူ့ကို နောက်ထပ်အတွေ့မခံသဖြင့် အောင်မင်း ကာမဆန္ဒတွေ မငြိမ်းသေးချေ။ ယခုလဲ ဒီလောက်တောင့်တောင့်ဖြောင့်ဖြောင့် ဆော်ကြီးနဲ့ ပူးပူးကပ်ကပ်နေနေရတော့ စိတ်တွေမနည်းထိန်းနေရသည်။ မှိန်းနေသော မလှမေကို ကြည့်ရင်း အောင်မင်းတယောက် တက်လိုးပစ်ချင်စိတ်တွေ ပေါက်လာသည်။
သူ၏လီးတန်ကြီးကတော့ ပုဆိုးအောက်မှာ တောင်မတ်နေသည်မှာ ပုဆိုးပင် ငေါထွက်လို့နေသည်။ အခုနေ မလှမေသာ မျက်လုံးဖွင့်ကြည့်လိုက်ရင်တော့ အခက်ပဲဟု တွေးမိနေ၏။ လှမေ၏မျက်ခွံလေးများ အသာမှေးရင်း အောင်မင်း၏ပုဆိုးထဲက တဆတ်ဆတ်တောင်နေတဲ့ လီးကြီးကို ကောင်းကောင်းမြင်နေရသည်။ တိတ်ဆိတ်မှုသည် ကာမစိတ်ကို ထကြွစေ၏။ လှမေ၏စောက်ပတ်ထဲတွင်လည်း စောက်ရည်လေးများ စို့ထွက်နေပြီဖြစ်သည်။ အကြင်နာလေးတွေနဲ့ ယက်ခတ်ပေးနေတဲ့ လေအေးလေးများသည် လှမေ၏ရင်ထဲအသဲထဲသို့ပင် အေးစိမ့်သွားနေသည်။ လှမေတယောက် သက်ပြင်းမျှင်းမျှင်းလေး ချလိုက်မိ၏။ အရွယ်ခြင်းမတူသူမို့ ပိုပြီးသေချာအောင် လှမေအချိန်ဆွဲနေရ၏။ နောက်တော့ မျက်လုံးလေးအသာဖွင့်ကြည့်ပြီး အံ့သြဟန်ဖြင့်… ” ဟယ်..အောင်အောင် ခုထိ အိမ်မပြန်ရသေးဘူးလား.. ” ” ဟုတ်တယ်..မမ၊ မမကို စိတ်မချလို့၊ တော်ကြာ ခေါင်းပိုကိုက်လာရင် ဘယ်သူမှ မရှိမှာစိုးလို့ ” ” အောင်အောင်ရယ်. .ကျေးဇူးတင်ပါတယ်.. ” လှမေက အသာအယာထပြီး လဲကျမဲ့ဟန်လေးလုပ်ပြလိုက်တော့ လက်သွက်တဲ့အောင်မင်းက လှမ်းပြီး သူမ၏ကိုယ်လုံးလေးကိုပွေ့ထားလိုက်၏။ ” လာ..မမ အခန်းထဲ တွဲပို့ပေးမယ် ” အောင်မင်း၏ရင်ခွင်ထဲ မှေးရင်း လှမေသည် အခန်းထဲသို့ တွဲဝင်လာခဲ့သည်။ သူမ၏ကိုယ်လုံးလေးကို ထိန်းထားပေးသော အောင်မင်း၏လက်တဖက်က လှမေ၏နို့အုံလေးကို ဆုပ်ကိုင်ထား၏။ အောင်မင်းသည် ဖြစ်ချင်ရာဖြစ်စေတော့ လိုးပစ်လိုက်တော့မည်ဟု ဆုံးဖြတ်လိုက်တော့သည်။
သူကိုင်ထားသော လှမေ၏ရင်သားများသည် မာတင်းနေ၏။ တွဲလာရင်း ကြီးမားစွံ့ကားတဲ့ ဖင်သားကြီးတွေက သူ့ကိုလာပွတ်နေတော့ အောင်မင်း၏လီးက တဆတ်ဆတ်တောင်နေပေပြီ။ လှမေ၏ခေါင်းက ဆံနွယ်လေးများကို အောင်မင်းတချက်နမ်းပစ်လိုက်သည်။ နုဖတ်နေသော လှမေ၏အသားစိုင်များကလည်း သူ၏ကာမစိတ်ကို ချွန်းမအုပ်နိုင်အောင် နှိုးဆွနေ၏။ လှမေ၏ကိုယ်လုံးလေးကို ကုတင်ပေါ်လှဲသိပ်ရင်း အောင်မင်း၏ကိုယ်လုံးကြီးက ကပ်ပါလာသည်။ သူ့ပခုံးပေါ်သို့တင်ထားသော လက်နှစ်ဖက်ကလဲ မလွှတ်။ တဦးကိုတဦးစိုက်ကြည့်ပြီး လှလှ၏နဖူးကို အောင်မင်းက စနမ်းလိုက်တော့သည်။ နှစ်ဦးသား ထိန်းချုပ်ထားသော စိတ်များကို လွှတ်ပေးကာ နှုတ်ခမ်းချင်းစုပ်လိုက်မိကြသည်။ တော်တော်နှင့်မခွာကြပေ။ လှမေက အောင်မင်း၏ ကျောပြင်ကို ဖက်ထားသည်။ အောင်မင်းကလဲ အင်္ကျီပေါ်မှ သူမနို့နှစ်လုံးကို ပယ်ပယ်နယ်နယ်ချေပေးနေ၏။ ” ချစ်တယ် မမရယ်..ချစ်တယ် ” ” မမလည်း မင်းလိုပါပဲ အောင်အောင်ရယ်.. ” အောင်မင်းက လှမေ၏တကိုယ်လုံးကို ပွတ်သပ်ရင်း နှိပ်ကြယ်သီးလေးများကို တလုံးချင်းဖြုတ်ကာ သူမ၏ဘရာစီယာပေါ်ကနေ နမ်းနေ၏။ ပြီးနောက် ဘရာစီယာအောက်ဖက်ကို လက်လျှိုသွင်းပြီး နို့အုံကြီးကို ဆွဲကိုင်လျက် နို့သီးခေါင်းလေးကို ချေမွပေးလိုက်သည်။
လှမေ၏နို့အုံကြီးမှာ တင်းတင်းအိအိလေးရှိနေသောကြောင့် အရသာခံကာကိုင်နေပေမယ့် ဘရာစီယာခံထားသည့်အတွက် လွတ်လွတ်လပ်လပ် ကိုင်တွယ်ကာနယ်လို့မရဖြစ်နေသည်။ ထို့နောက် လှမေ၏နောက်ကျောကို လက်လှမ်းပြီး ဘရာစီယာချိတ်ကို ဖြုတ်ကာ ချွတ်လိုက်သောအခါ နို့အုံကြီးနှစ်လုံးက ထင်းထင်းလင်းလင်းကြီး ပေါ်ထွက်လာပါသည်။ အောင်မင်းသည် မို့မို့ဖောင်းဖောင်းဖြစ်နေသော နို့အုံကြီးများကို လက်ဖြင့် စုံကိုင်ပြီး စို့ပေးနေသည်။ လှမေကတော့ သူမလက်ချောင်းလေးတွေကို အောင်မင်းဆံပင်များအကြား ထိုးဖွရင်း တအင့်အင့်ဖြင့် အသံလေးများထွက်နေရ၏။ အောင်မင်းသည် လှမေ၏ခါးလေးကို ပွတ်ပေးနေရာက သူမ၏ထဘီကို ချွတ်လိုက်တော့သည်။ လီးနဲ့ဝေးတာ သုံးနှစ်တောင် ရှိနေတဲ့ စိမ်းစိမ်းညို့ညို့ မို့ထွက်နေတဲ့ လှမေ၏စောက်ဖုတ်လေးကို ရွရွလေးပွတ်ပေးနေ၏။ အနေရခက်လှသော လှမေက အောင်မင်း၏နှုတ်ခမ်းကို ဖမ်းပြီး လျှာလေးထိုးပေးကာ နှုတ်ခမ်းချင်း စုပ်ပေးနေမိပြန်သည်။” ဟင့်..အင့်.. အောင်ရယ်. .လိုးမှာဖြင့်လိုးတော့ကွယ်..မမ မနေတတ်တော့ဘူး..အောင်လေးရယ်.. ” လှမေ၏ပေါင်နှစ်လုံးကို ဒူးကွေးကာ ထောင်လိုက်ပြီး စောက်ပတ်အကွဲကြောင်းလေးထဲသို့ အောင်မင်းက သူ့လီးကြီးနဲ့အသာတေ့ပြီး ဖိသွင်းလိုက်တော့၏။ ” ဗြစ်..ဗြစ်..ဖွတ်..ဖွတ် ” ” အား..အား..နာ..တယ် အောင်ရယ်.. ” အောင်မင်း၏ရင်ဘတ်ကို သူမ စုံတွန်းထားလိုက်သည်။ အရင်ကအလိုးခံဘူးခဲ့ပေမဲ့ အခုအသစ်ဖြစ်နေတဲ့ စောက်ပတ်လေးက ကျဉ်းပြီး ကျိန်းနေ၏။ သို့သော် အောင်မင်း၏လီးကြီးတချောင်းလုံးကတော့ လှမေ၏စောက်ပတ်လေးထဲသို့ တဆုံးဝင်သွားခဲ့ရချေပြီ။ အောင်မင်းက သူမ၏နို့ကြီးများကို တလှည့်စီစို့ပေးနေတော့ရာ လှမေခမျာ တင်ပါးကြီးကိုတွန့်ပြီး ရမ်းလိုက်ရပြီး စောက်ရည်များလဲ ပိုထွက်လာတော့သည်။ ” ပြွတ်..ဖွတ်..ဖွတ်..ပြွတ် ” အောင်မင်းက တချက်ချင်းစီလိုးပေးတော့ လှမေခံနိုင်ရည်နဲနဲရှိလာသည်။
သူမ၏စောက်ပတ်နှုတ်ခမ်းလေးများသည် ဆောင့်လိုက်ရင် ခွက်ဝင်သွားပြီး လီးပြန်အနှုတ်တွင် လီးတန်ကြီးနှင့် ကပ်ကပ်ပြီးပါလာကာ အပြင်သို့စူ စူထွက်လာကြရ၏။ ထွက်လာသော အရည်များကြောင့် လီးဝင်ထွက်သံများ ပိုကျယ်လာပြီး တရှိန်ထိုး ဆောင့်ဝင်လာတဲ့ အောင်မင်း၏လီးကြီးကို လှမေ၏စောက်ပတ်အတွင်းသားလေးများက ညှပ်ပြီးဆွဲဆွဲပေးနေသည်။ အောင်မင်းက အားရပါးရဆောင့်နေသလို သူမကလည်း ကော့ ကော့ပြီး အလိုးခံနေသည်။ ” ဟင့်..ဟင့်..နာနာဆောင့် စမ်းပါ..အောင်ရယ်..မမပြီးချင်ပြီ.. ” ” ဖွတ်.. ပြွတ်..ဖွတ်..အာ့..အား ” ဒီတခါမှာတော့ အောင်မင်းလဲ ရင်ထဲမှာ ဘလောင်ဆူနေပြီမို့ ခပ်သွက်သွက်ကြီး ဆောင့် ဆောင့်လိုးပစ်လိုက်တော့သည်။ ထို့နောက် လီးတချောင်းလုံး ကျင်တက်လာကာ သုံးလေးချက်မျှ အားကုန်ဆောင့်ပြီး လီးတန်ကြီးကို စောက်ခေါင်းထဲ အဆုံးနှစ်လျှက် သုတ်ရည်တွေ တလျှော့ပြီး တလျှော့ ပန်းထည့်လိုက်တော့သည်။ မလှမေကလည်း အောင်မင်း၏ခါးကို ခြေနှစ်ဖက်ဖြင့်ဆွဲချိတ်လျက် သူမ၏ တင်ပါးကြီး ကော့တင်ထားရင်း တွန့်လိမ်လူးလွန့်နေတော့သတည်း။ချိုချိုတို့မိသားစုမှာ လူများများရှိသည်မဟုတ်။ အမေရယ်၊ အမေ့နောက်ယောကျာ်းဦးဝင်းစိန်ရယ်၊ အစ်မခင်သိန်းရယ်၊ ချိုချိုရယ် တအိမ်ထဲနေခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်။ ချိုချိုသည် ခင်သိန်းအိမ်ထောင်ကျပြီးကတည်းက သူတို့နှင့်အတူလိုက်နေခဲ့လေသည်။ခင်သိန်းယောကျာ်း ကိုတင်အောင်က ခဏခဏခရီးထွက်နေရပြီး တလလျှင်ဆယ်ရက်လောက်သာ အိမ်မြဲသူဖြစ်သည်။ ဒီတခါတော့ မခင်သိန်း၏ယောကျာ်းကိုတင်အောင်တယောက် ပြန်လာရမည့်ရက်ထက် စောပြန်ရောက်လာလေသည်။ အိမ်တွင်လည်း မခင်သိန်းက မရှိ။ အကိုတင်အောင်ပြန်လာတော့ ချိုချိုက ရေချိုးရန် အိမ်ဘေးသို့အဆင်းဖြစ်သည်။ ကိုတင်အောင်က ထမီရင်လျားထားတဲ့ ချိုချို့ကိုယ်လုံးလေးကို စူးစိုက်ကြည့်သွားသေးသည်။ ချိုချိုရေချိုးနေစဉ်မှာလဲ ကိုတင်အောင်က ပြူတင်းပေါက်နား မယောင်မလည် လုပ်နေတာတွေ့ရသေး၏။ ချို ရင်ထဲမှာတော့ လှုပ်ရှားမိသား။ ကိုတင်အောင်က သဘောကောင်းပြီး မခင်သိန်းကိုလည်း သံယောဇဉ်ကြီးရှာ၏။ ပြီးတော့ ခဲအိုသာဆိုရတယ်။ ချိုချိုအပေါ်လဲ ဂရုတစိုက်ရှိသူဖြစ်သည်။ ရေချိုးပြီးနောက် ခင်သိန်းတို့အခန်းကို ရှင်းလင်းပြီး ခဲအိုအတွက် အိပ်ယာခင်းပေးရန် သတိရ၍ သူတို့အခန်းဖက်သို့ ကူးလာခဲ့သည်။
အိပ်ယာခင်းပေးနေစဉ် ကုတင်ဘေးကို ခြေထောက်တစုံရောက်လာလို့ မော့ကြည့်လိုက်တော့ ကိုတင်အောင်ပင်ဖြစ်သည်။ သူက ချို့ရင်သားတွေကို ငုံ့ပြီးကြည့်နေတယ်လေ။ စောစောက အိမ်နေရင်းမို့ အင်္ကျီကြယ်သီးနှစ်လုံးကို ဖြုတ်ထားမိသည်။ ရေချိုးပြီးကာစဆိုတော့ အောက်ခံဘော်လီကလည်းမပါချေ။ ချိုချို၏ ဝင်းမွတ်ဆူဖြိုးသော ရင်သားစိုင်နှစ်ခုက အလှပြနေသလို ဖြစ်နေကြသည်။ ချိုချို ကိုတင်အောင်ကို မျက်နှာချင်းမဆိုင်ရဲလို့ သူ့ခါးကိုမော့ကြည့်လိုက်တော့ ချို့ရင်ထဲ လှိုက်ဖိုလို့သွားရသည်။ ပုဆိုးအောက်က သူ့လီးကြီးက ဖောင်းကြွလို့နေသည်။ ဟိုတခါက သူတို့လင်မယားလိုးကြတာကို ချို ချောင်းကြည့်ဖူးသည်။ ကြီးမားရှည်လျားလိုက်တဲ့ လီးကြီး။ ဘာကြောင့်မှန်းမသိ ချို တံထွေးတချက် မျိုချလိုက်မိသည်။ ဆိတ်ကွယ်ရာမှာ ကာမစိတ်တွေ ထတတ်တာမို့ ချို မရဲတရဲလေးနဲ့ ထပ်မော့ကြည့်လိုက်တော့ ကိုတင်အောင်က ချို့တကိုယ်လုံးကို မျက်တောင်မခတ်ပဲ စိုက်ကြည့်နေတာများ…။ ပြီးတော့ ကိုတင်အောင်က ချို့ပခုံးနှစ်ဖက်ကို ဆုပ်ကိုင်လိုက်သည်။ ချို ရူးတော့မယ်။ ဆတ်ကနဲ ထပြီး ပြေးရရင် ကောင်းမလား။ “ဟင်း” ချိုချို သက်ပြင်းတချက်ခိုးချလိုက်မိသည်။ ငုံ့နေသော ချိုချို၏မျက်နှာလေးကို မော့ယူပြီး အကိုတင်အောင်က ပါးလေးတဖက်ကို ညင်ညင်သာသာနမ်းသည်။ ချိုချိုမှာ ကြည်နူးရွှင်ပြမှုလေးနှင့်အတူ ကာမရမ္မက်ဇောကို ပူးတွဲခံစားလိုက်ရသည်။
ပြီးတော့ ချို့ပခုံးပေါ်မှ သူ့လက်နှစ်ဖက်ကို ပြန်ရုပ်သိမ်းသွားသည်။ သဘောကတော့ ချိုချိုထွက်သွားချင်တယ်ဆိုရင် ထွက်သွားနိုင်အောင် လမ်းဖွင့်ပေးတဲ့သဘော။ အသက်ကြီးသူမို့ အသိတရားက ထွက်သွားစေချင်ပေမဲ့ ကာမအခိုးတွေ လျှံနေတဲ့ သူ့မျက်လုံးတွေကတော့ မသွားပါနဲ့ ချိုချိုရယ်ဟု အသနားခံနေဘိအလား။ ချိုချိုတယောက် ရင်တွေဖိုနေလို့လားမသိ။ သူမ၏နို့နှစ်လုံးက နိမ့်ချီမြင့်ချီဖြစ်နေသည်။ ကုတင်စောင်းမှာ ထိုင်နေတဲ့ ချိုကပဲ သူ့ရင်ခွင်ထဲ ဝင်သွားသလား။ သူကပဲ ချို့မျက်နှာလေးကို မတ်တတ်ရပ်နေတဲ့ သူ့ရင်ခွင်ထဲ ဆွဲသွင်းလိုက်တာလား မသိလိုက်မီမှာပင် ချို့မျက်နှာက သူ့ရင်ခွင်ထဲရောက်လို့နေပြီ။ သူက ချိုချို့ခေါင်းလေးကို ဖက်ထားရင်း နောက်လက်တဖက်က ချိုဝတ်ထားသော ရှပ်အင်္ကျီကြယ်သီးတွေကို လှမ်းဖြုတ်နေသည်။ ပြီးတော့ ကိုတင်အောင်က ကုတင်ပေါ်ထိုင်ချရင်း ချိုချို့နှုတ်ခမ်းတွေကို နမ်းစုပ်တော့သည်။ ချိုချိုကလဲ သူ့နှုတ်ခမ်းကြားထဲ တိုးဝင်လာသော ကိုတင်အောင့်လျှာကြီးအတွက် အသာလေး အလိုက်သင့်ဟပေးလိုက်သည်။အစ်မရယ်.. အမိုက်မချိုချိုကို ခွင့်လွှတ်ပါတော့လို့ စိတ်ထဲက အကြိမ်ကြိမ်တောင်းပန်ရင်း သူ့ဆံပင်တွေကို ပွတ်သပ်ပေးနေမိတော့၏။ သို့နှင့် ကိုတင်အောင်က ဖိကပ်နမ်းရှုံ့နေမှုကို ရပ်လျက် နှုတ်ခမ်းချင်းခွာလိုက်ကာ ကြယ်သီးများပြုတ်ထွက်နေသာ ချိုချို့အင်္ကျီလေးကို ချွတ်လိုက်တော့သည်။ တလက်စတည်းပင် ထမီကိုလည်း ဆွဲချွတ်လိုက်ရာ ချိုချိုက တင်ပါးကြီးကို ကြွပေးလိုက်မှသာ လျောလျောလျူလျူကျွတ်ထွက်သွားလေသည်။ တင်အောင်က ကိုယ်လုံးတီးဖြစ်သွားသော ချိုချို့ဝတ်လစ်စလစ်အလှကို ကြည့်ရင်း နို့ကြီးနှစ်လုံးကို ဆုပ်နယ်ပေးလိုက်သည်။ ” အင့်..ဟင့်..ဟင့်.. ” ညည်းညူသံလေးပေါ်ထွက်လာပြီး ချို့လက်တဖက်က ကိုတင်အောင်ပေါင်နှစ်လုံးကြားထဲ ရောက်သွားပြီး လီးချောင်းကြီးကို ပုဆိုးပေါ်မှ အုပ်ကိုင်လိုက်မိတော့သည်။ နို့စို့တာလဲ အလွန်သန်တဲ့လူကြီးဟုပင် ဆိုရမလားမသိ။ ဟိုဖက်စို့လိုက် ဒီဖက်စို့လိုက်နဲ့။ လက်တဖက်ကလဲ စောက်ဖုတ်လေးကို ပွတ်ပေးနေ၏။ စောက်စေ့လေးကျမှ လက်ညိုး လက်မနဲ့ညှပ်ကာ ပွတ်ချေပေးနေသည်။
” အာ..အ..အင်း.. ” ချိုချိုတယောက် မနေနိုင်တော့ဘူး။ သူ့ပုဆိုးက ဆွဲချွတ်ချပြီး တောင်နေတဲ့ သူ့လီးကြီးကို အတင်းဆုတ်ချေပေးမိတော့သည်။ အားပါးပါး..။ လီးကြီးက အကြောတွေ တထောင်းထောင်းထလို့နေသည်။ သူက ချိုချို့နှုတ်ခမ်းတွေကို နမ်းစုပ်နေရင်း လိုးချင်စိတ်တွေ အရမ်းထန်လာပုံရသည်။ ချိုချို့ကို ပွေ့ပြီး ကုတင်ပေါ်တင်လိုက်သည်။ ချို့လက်ထဲ ဆုတ်ကိုင်ထားတဲ့ လီးကြီးကလဲ ကြီးမားရှည်လျားလွန်းလှသည်။ ကိုအောင်မင်းလီးထက်တောင် ပိုကြီးနေသလိုပဲရှင်။ စိတ်ထဲတွင်သာမက ကျောထဲကပါစိမ့်ကနဲနေအောင်ခံစားမိပါတယ်။ ကုတင်ပေါ်ကို ရောက်တာနဲ့ သူက ချို့ကိုပေါင်ကနေဆွဲယူပြီး ခြေဖဝါးတွေကို သူ့ပခုံးပေါ်တင်လိုက်ကာ လူကိုတစ်တီတူးဖြစ်စေတော့တာပါပဲ။ စောက်ပတ်အကွဲကြောင်းတလျှောက် လီးကြီးနဲ့ ကော်တင်ရင်း ချို့ကို နှာထန်လာအောင် သူ ဆွနေတယ်လေ။ စောက်စေ့လေးနား ကျတော့မှ ဆတ်ကနဲ ထိုးပေးလိုက်တော့ ချို့ စောက်ရည်တွေ ပွက်ကနဲ ထွက်ကျကုန်ရပြီပေါ့။
” အ..အ…အီး.. လိုးမှာဖြင့် လိုး..တော့..အကိုရယ်.. ချို..မနေနိုင်တော့ဘူး.. ” ” ကဲ..လိုးပါ့မယ်.. ချို့ပေါင်လေးတွေကို လက်နဲ့ထိန်းထား.. ဒါမှ ကောင်းကောင်းလိုးလို့ရမှာ ” ချိုက လက်နှစ်ဖက်ဖြင့် ပေါင်နှစ်ချောင်းကို ဆွဲထားလိုက်ရာ စောက်ဖုတ်လေးမှာ နီရဲပြဲလန်ထွက်လာလေသည်။ ထိုအခါမှ ကိုယ်တော်ချောက လီးချောင်းကြီးကို ဇိကနဲထိုးသွင်းလိုက်တော့သည်။ ” ဗြစ်..ဗြစ်.. အာ..အင့်..ဖွတ်..ပြွတ်..ဖွတ် ” လီးကြီးကိုပစ်သွင်းဆောင့်တာများ ချို့ကိုယ်လုံးလေး မြှောက်မြှောက်သွားမိရော။ သူ့လိုးချက်က ပြင်းထန်ပြီး မြန်လိုက်တာ။ သွင်းတယ် ထုတ်တယ် ခပ်သွက်သွက်။ ချို့ကိုယ်လုံးလေးကို ထွေးနေအောင် ဖက်ထားရင်း ဖိဖိပြီးလိုးနေလိုက်တာ ကွဲမတတ်ပါပဲရှင်။ ချိုလဲ တတ်သလောက် အောက်ကဖင်ကြီးကို ပြန်ကော့ကော့ပေးနေမိတယ်။ သူကပိုပြီး ဒေါသကြီးလာကာ အားစိုက်ပြီး ဖိလိုးလိုက်၏။ ” အား..အား..ဘွပ်..ဘွပ်..အိ..အာ့..ဘွပ်.. ပြွတ်..ဗြစ်..ဗြစ်..ဟင့်..ဟင့်.. ” နို့လေးတွေကိုလဲ အတင်းဆုတ်နယ်ရင်း ချို့နှုတ်ခမ်းဖူးဖူးလေးတွေကို မီးပွင့်မတတ်စုပ်နေတာ။ လိုးအားရော ချေအားပါကောင်းလှသည်။ နှုတ်ခမ်းအစုပ်လည်း အလွန်ကောင်း၏။ သူ့လီးချောင်းကြီးက ရှည်တော့ တခါတခါ ချိုက သားအိမ်ဝကို လာလာထောက်နေသေးရဲ့။ ” ချို..အကို လိုးတာကောင်းရဲ့လား ” ချိုချိုတယောက် စကားပြောဖို့ အသက်ကိုလုရှုနေရသည်။
” ကောင်းရဲ့လားလို့.. အကို မေးနေတယ်လေ ” စကားပြောရင်း လီးကိုလည်း ခပ်ပြင်းပြင်း လိုးသွင်းနေတာမို့ ချိုချိုခမျာ ငြီးသံ၊ အသက်ရှုမှားသံတွေပင် ထွက်လို့။ ” အာ့..ကောင်းတယ်..အကို..ကောင်းပါတယ်.. အား…ရှီး..အင့်..ဟင့်..ဟင့်.. ” ” အင်း.. အင့်..အို..အို.. ” ” အထဲမှာပြည့်တင်းနေတာပဲ.. အကိုရာ..အား…အီးး…. ” ” ဖွတ်.. ပြွတ်..အား..အား..ဗလွတ်.. ပြွတ်..အား..အင့်.. ” သူ့ရဲ့ဆောင့်အားတွေ သိသိသာသာ ပိုပြီးပြင်းထန်လာတာနဲ့အမျှ ချိုချိုတယောက် အားတက်လာမိပြီး ရှိသမျှအားလေးနဲ့ ကော့ ကော့ပြီး အလိုးခံလိုက်မိတော့၏။ ” သိပ်ကောင်းတာပဲ..အကိုရယ်.. ဆောင့်ထည့်လိုက်စမ်းပါ.. ဟင့်..ဟင့်.. ” ကိုတင်အောင့် လီးကြီးတဆုံး သူမစောက်ခေါင်းထဲဝင်၍ သားအိမ်ဝဆီ ဒုတ်ဒုတ်ထိ ထိုးမိထိမိအောင် ချိုချိုတယောက် ပေါင်ကြီးတွေကို ဖြဲကားပေးလျက် လက်ကလေးများနှင့် ထိန်းထားပေးနေပါသည်။ ” ဖွတ်.. ပြွတ်..အာ့..အင့်..ဟင့်.. ” ကိုတင်အောင်ရဲ့အင်ဂျင်စက်တပ်ထားသလို ဆောင့်ချက်တွေအောက်မှာ ချိုချိုစောက်ရည်တွေ ဒလကြမ်းထွက်ကုန်တော့သည်။ ဒေါသကြီးနေတဲ့ သူ့လီးကြီးကလဲ အားကျမခံ စောက်ရည်တွေကို တိုးပြီး အတင်းဆောင့်လိုးနေရင်းက ချိုချို့စောက်ခေါင်းအတွင်းပိုင်းဆီ သုက်ရည်ပူတွေ ပစ်သွင်းလိုက်ပါတော့တယ်။ပြီးးးး…